Inona no Hataoko fa Tsy Mahay Miresaka Amin’i Dada sy Neny Aho?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Albaney Alemà Altaï Alur Anglisy Arabo Armenianina Asamey Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gokana Goujrati Goun Grika Guarani Guerze Guéré Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kosrae Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quiché Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Maninona àry Aho no Tsy Mahay Miresaka Amin-dry Zareo?
Hahafinaritra kokoa ny fiainanao raha miezaka tsy miady amin’ny ray aman-dreninao ianao.
Eritrereto ange ity tantaran’i Hery, 17 taona, ity e! Alarobia hariva tamin’izay. Efa vitany daholo ny raharahany, dia mba haka aina amin’izay izy. Nalefany ny tele, ary nitsotsotra teo amin’ilay seza tena tiany izy.
Tamin’izay indrindra no niditra avy any ny dadany, sady tezitezitra.
Hoy izy tamin’i Hery: “Toa ilaozan’ialahy mijery tele fotsiny, nefa ialahy tokony hanampy ny zandrin’ialahy amin’ny devoarany? Sarotra irahina mihitsy ialahy ity!”
Ningonongonona i Hery hoe: “Izay indray ’nareo.”
“Avereno kely hoe ny tenin’ialahy teo?”, hoy ny dadany.
“Izaho angaha niteny!”, hoy izy nisento sady nangarika.
Izay vao tena tezitra ny dadany. Hoy izy: “Izaho aza anaovana fiteny hoatr’izany an!”
Inona no ho nataonao raha ianao no Hery?
Hoatran’ny hoe mitondra fiara ianao, rehefa miresaka amin’ny ray aman-dreninao. Afaka mitady lalan-kafa foana ianao, na dia misy zavatra manakana aza eny an-dalana.
Hoy i Lila: “Mandreraka mihitsy ny miresaka amin’ny dadanay! Efa miteny elaela ianao indraindray vao taitra izy hoe: ‘An? Ahoana hozy ianao?’”
MANANA SAFIDY TELO I LILA, FARA FAHAKELINY.
Mivazavaza amin’ny dadany hoe:
“Henoy aho ho’ah fa zava-dehibe ange ilay tiako hotenenina amin’i Dada e!”
Tsy miresaka amin’ny dadany intsony.
Aleony tsy tantaraina intsony ny olana mahazo azy.
Miandry fotoana mety kokoa hiresahana an’ilay izy indray.
Miresaka mivantana amin’ny dadany i Lila, na manoratra taratasy.
Iza amin’ireo no hitanao hoe tokony hataony?
ERITRERETO IZAO: Variana ny dadan’i Lila ka tsy mahita fa malahelo izy. Raha ilay Safidy 1 no ataon’i Lila, dia mety tsy ho azon’ny dadany hoe maninona izy no mivazavaza. Tsy manaja ny dadany koa izy, ka vao mainka mety tsy hihaino azy ny dadany. (Efesianina 6:2) Tsy mety àry io safidy io.
Misy lalan-kafa azo aleha foana, na misy sakana aza eny an-dalana. Hahita fomba iresahana amin’ny ray aman-dreninao foana koa ianao na misy olana aza
Ilay Safidy 2 no tsotra indrindra, saingy io no tena tsy mety. Nahoana? Satria mila miresaka amin’ny dadany i Lila, raha tiany hilamina ilay olana mahazo azy. Tsy ho afaka hanampy azy anefa ny dadany raha tsy fantany ilay olana. Tsy vahaolana àry ilay hoe tsy miresaka.
Ary ahoana ilay Safidy 3? Tsy kivy izy na dia nisy sakana aza, fa mbola hiezaka hiresaka amin’ny dadany ihany, saingy miandry fotoana mety fotsiny. Azony atao koa anefa ny manoratra taratasy ho an’ny dadany. Mety ho maivamaivana izy amin’izay.
Ho tafavoakany tsara koa izay tena tiany holazaina raha manoratra taratasy izy, ary ho fantatry ny dadany ilay saika hoteneniny. Ho azony hoe inona marina ilay olana. Io safidy io àry no tena tsara, satria sady mahasoa an’i Lila no mahasoa an’ny dadany. Mampihatra an’izay lazain’ny Baiboly izy raha manao an’izany, satria miezaka ‘mampisy fihavanana.’—Romanina 14:19.
Inona ny zavatra hafa azon’i Lila atao?
Soraty eto izany, raha mahita ianao. Soraty koa ny mety ho vokany.
“Hajao ny rainao sy ny reninao.” —Efesianina 6:2.
‘Aoka ho teny mahafinaritra foana no holazainareo.’—Kolosianina 4:6.
‘Aoka ianao ho mailaka hihaino, tsy ho maika hiteny, tsy ho mora tezitra.’—Jakoba 1:19.
ATAOVY MAZAVA TSARA NY TENINAO
Tadidio fa mety ho hafa mihitsy no andraisan’ny ray aman-dreninao ny teninao.
Anontanian’ny ray aman-dreninao ianao hoe maninona no hoatran’ny malahelohelo. Dia hoy ianao: “Tsy maninona aho ka!”
Izao anefa no mety handraisan’ny ray aman-dreninao an’izany: “Izaho tsy matoky anareo fa aleoko miresaka amin’ny namako.”
Eritrereto indray hoe misy zavatra mampiasa saina anao, dia mba te hanampy anao ny ray aman-dreninao. Izao anefa no teneninao: “Aok’izao fa aza miditra amin’izany ’nareo e!”
Ahoana no mety handraisany an’izany?
Inona no hitanao hoe valin-teny mety kokoa?
Izao no hataoko amin’ny manaraka, raha hoatran’ny tsy te hiresaka amin’i Dada sy Neny aho:
Izao no hoteneniko, raha misy zavatra tsy tiako horesahina nefa mbola misisika ihany ry zareo:
Soratra Fandikana boky Fanontaniana 10 Mahaliana ny Tanora
Raki-peo Fandikana raki-peo Fanontaniana 10 Mahaliana ny Tanora